२ टाउको र ३ आँखा भएको सुँगुर जन्मियो…! – Khabar PatrikaNp
२ टाउको र ३ आँखा भएको सुँगुर जन्मियो…!
August 19, 2020 67
काठमाडौ हालै सामाजि-क संजालमा दुई वटा टाउको भएको सुँगुरको तस्विर भाइरल भएको छ । कोलम्बियामा एक किसानले पालेको सुँगुरले दुई टाउको भएको बच्चा जन्माएको छ ।
उक्त बच्च जन्मेपछि हेर्ने मानिसको भिड लागेको थियो । सुँगुरले १ टाउको र ३ आँखा भएको बच्चाको जन्म दियो जब उसको जन्म भयो किसान पनि अचम्मित परे सेतो र कालो रंगको ।
सुगुरको यो बच्चा लिनको लागि मानिसको घुइचाु लागेको थियो । कम्तिमा पनि २०० देखि ४०० सुँगुर पालेका उनले पहिलो पटक यस्तो घटना घटेको बताउछन् । र जब उसको जन्म भयो किसानले आफ्नो भाग्य खुलेको बताएका छन् । उनले १ टाउको र ३ आँखा भएको सुँगुरको बच्चालाई खरिद गर्न व्यापारीहरुले महंगो रकम दिएको पनि बताए ।
कोरोना भाइरस रोग(कोभिड १९)को महामारीबाट जोगिने उपाय भनेको सामाजिक दुरी कायम राख्ने, साबुन पानीले पटक–पटक हात धुने तथा लकडाउन पालना गर्नु नै हो । नेपालमा लकडाउन केही खुकुलो बनाइएपनि विद्यालयहरु बन्दनै छन् । जसका कारण करिव ८० दिनदेखि बालबालिका विहान देखि बेलुकीसम्म घरमै बसिरहेका छन् भने परिवारका अन्य सदस्यहरु पनि ।
Prevअन्त्येष्टिका लागि भेला भएका मलामीको जब भागाभाग….
Nextहतारमा पीसीआर परीक्षण : “रिपोर्ट नेगेटिभ तर व्यक्ति संक्रमित”
मन्त्रिपरिषद्मा हटाइएकोमा लालबाबु पण्डितकोआक्रोश : हेर्दै जानुस्, उहाँले पछुताउने दिन आउँछ
नायिका एलिजा गौतम राहत बोकेर सिन्धुपाल्चोक हिडिन
शुक्रबार लक्ष्मी माताको आरती र मन्त्र जसको उच्चारणले मिल्छ शुभ फल ..!
हिमानीको ‘यो मन त मेरो नेपालि हो’ भन्दै नाचे